भर्खरै नदिमा युवक बगिरहेको बेला मलाई बचाउ भनेपछि तुरुन्तै नदिमा कुदे एक जवान आर्मी || (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
भर्खरै नदिमा युवक बगिरहेको बेला मलाई बचाउ भनेपछि तुरुन्तै नदिमा कुदे एक जवान आर्मी || (भिडियो हेर्नुस्)
August 13, 2021 August 13, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
भर्खरै नदिमा युवक बगिरहेको बेला मलाई बचाउ भनेपछि तुरुन्तै नदिमा कुदे एक जवान आर्मी || (भिडियो हेर्नुस्) भर्खरै नदिमा युवक बगिरहेको बेला मलाई बचाउ भनेपछि तुरुन्तै नदिमा कुदे एक जवान आर्मी || (भिडियो हेर्नुस्) यो समाचारलाई अन्तिममा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला, यो अर्को खबर पनि पढ्नुहोस् !!
यस वर्षको नाग पञ्चमी दुर्लभ योग बनेको छ। राहु–केतु र काल सर्प दोषसंग सम्बन्धित यो महासंयोग १०८ बर्षपछि बनेका छन्। ज्योतिषीहरुका अनुसार यो बर्षको नाग पञ्चमीमा यस पटक योग उत्तरा र हस्त नक्षत्रको महासंयोग बनेको छ।
यस पटक कला शर्प दोषबाट मुक्ति पाउनको लागि परिगणित र शिन नामक नक्षत्र लाग्दै छ। जसको कारण मेष, वृष, कर्कट र मकर राशि भएकाहरुको लागी आर्थिक लाभ हुने सम्भावना रहेको छ।नाग पञ्चमी यस वर्ष अगस्ट १३ तारिख शुक्रबार परेको छ। आज हामि यस पोस्ट मार्फत नाग पञ्चमीको दिन राशि हरुमा पर्नेको प्रभावको बारेमा बताउने छौँ।
मेष राशिका मानिसहरुको लागी धन लाभ हुने योग रहेको छ। सन्तान पक्षमा प्रगति हुनेछ। लामो समय देखिको चिन्ता हल हुनेछ। यस राशिका मानिसहरुले नाग पञ्चमीमा अनन्त नागको पूजा गर्नुपर्छ।
वृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)
आर्थिक स्थिति ठीक रहनेछ। अचल सम्पत्ति लाभ हुन सक्छ। नयाँ कामको थालनी हुन सक्छ। वृष राशिका मानिसहरुले नागपञ्चमीमा कुलिग नागको पूजा गर्नु उत्तम हुनेछ।
मिथुन राशिका मानिसहरुले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्नेछ। परिवारमा विवाद हुन सक्छ। नाग पञ्चमीमा यस राशिका मानिसहरुले वासुकी नागको पूजा गर्दा उत्तम हुनेछ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुले जागिरमा नयाँ अवसर प्राप्त गर्नु हुनेछ। व्यापार, व्यवसायमा लाभ हुने सम्भावना छ। अनावश्यक विवाद बाट टाढा रहनुहोस्। शंखपाल नागको पूजा गर्नाले यस राशिका मानिसहरुलाई लाभ हुनेछ।
सिंह राशिका मानिसहरु मानसिक रुपमा बलियो हुनेछन्। तपाईको अधुरो काम बन्नेछ। धन लाभ हुन सक्छ। यस दिन पद्म नाग को पूजा गर्नाले उत्तम हुनेछ।
कन्या राशि भएकाहरुको लागी छोटो यात्रा को संभावना छ। कार्य क्षेत्रमा लाभ हुन सक्छ। धन लाभको सम्भावना पनि छ। यस राशिका मानिसहरु महापद्मा नाग को पूजा गरेर लाभान्वित हुनेछन्।
तुला राशिको जातकले स्वास्थ्यको धेरै ख्याल राख्नुहोस्। कुनै प्रकारको बहाना नबनाउनुहोस्। शिवलाई जल अर्पण गर्नुहोस् र नाग पञ्चमीको दीन तक्षक नाग को पूजा गर्नुहोस्।
वृश्चिक राशिका मानिसहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट छुट्कारा पाउनु हुनेछ। अनावश्यक तनाव लिन सक्छ। जीवन साथीको लागी लाभको संभावनाहरु छन्। वृश्चिक राशिका जातकले नागपञ्चमीमा कर्कोटाग नागको पूजा गर्द उत्तम हुनेछ।
जीवन शैलीमा परिवर्तन आउने छ। परिवारमा व्यस्त भइने छ। आर्थिक स्थितिमा सुधार हुनेछ। नाग पञ्चमीको दिन यस राशिका मानिसहरुले शंखचूर्न नागको पूजा गर्नु पर्दछ।
कुम्भ राशिका जातकाले स्वास्थ्यको बिषेस ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। अनावश्यक चिन्ताबाट टाढा रहनु होला। शिवलाई जल अर्पण गर्नुहोस्। साथै एक विषालु सर्प नाग पञ्चमीको अवसरमा पुजा गर्नु होला।
मीन राशिका मानिसहरुको काममा परिवर्तनको सम्भावना छ। छोटो यात्रा हुन सक्छ। शिक्षकले आफ्नो पेशामा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। यस राशिका मानिसहरुले शेषनागको पूजा गर्दा उत्तम हुनेछ।
आफ्नै बुबाले ११ बर्षकि छोरीलाई पटक पटक क रणी गरे, ध म्की दिएर यस्तो सम्म गरेछन !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
हेर्दाहेर्दै ७३ जना बोकेको बिमान दु र्घटना हुन बाट बच्यो, पाइलटको यति ठुलो सफलता ।। (भिडियो हेर्नुहोस्)
Previous Article भर्खरै ख’तर नाक बाढीले बनेपा चुर्लुम्मै डुबानमा, जिल्लाभरि मच्चियो हा’हा कार ।। (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article सरकारले ल्यायो एस्तो राम्रो नियम, अबदेखी जागिरेले पनि एती धेरै ऋण लिन पाउने !!